Stacy • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
** Kitiho ny zana-tsipiky ny sary ambony ho ahy **
Tongasoa mpitsangatsangana sy mpitsidika anao ~
(Hotely sy trano tokana voafantina)Salama Stacy aho, misaotra anao nanokana fotoana hamakiana ny doka nataoko. Ity dia fanasana manokana ho an'ireo rangahy matotra ambony.
Izaho dia hatsaran-tarehy amerikana italianina rehetra ary Scorpio mafana fo mirehitra. Namboarina tsara tsy misy tombokavatsa ary tsy mifoka. 32DDD voajanahary rehetra, 5 ′ 2 ″ lava, 128lbs ary curvy. Ankafiziko ny tantara, ny famakiana, ny fivezivezena ary ny Champagne vera tsara. Manome fanorana erotika mahatalanjona aho miaraka amina fikolokoloana manaitaitra maro.
Tonga haingana sy malina amin'ny fampiononanao aho ary mitondra ny tenako. Ankafiziko ireo mpandehandeha sy mpitsidika ary manao azy ireo ho lohalaharana.
Heveriko ho mpinamana mety ho azy daholo ny mpanjifako ary izay manomboka amin'ny fihaonana tsy ampoizina dia mety hanjary ho finamanana marina. Mino aho fa ambany ny habetsany sy ny kalitao avo lenta.
Avelao ny otra manintona ahy ho fialantsasatrao amin'ny fandaharam-potoanananao miasa be ary manome fahatoniana. Misy amin'ny 10 maraina hatramin'ny 1130PM miaraka amin'ny fanamarihana 30 ka hatramin'ny 35 minitra
Manosotra anao ny vatam-bolo sy ara-nofo ary mamy.
200 $ / HR SF / SFO Airport / Emeryville /
Faritra East Bay (Outcall ihany)
~ Tsy misy lahatsoratra na voasakana #s azafady ~ Andro fanendrena amin'ny andro mitovy (415) 730-2701
San Francisco, CA, Etazonia